Nokia Steel HR – smart столько, сколько нужно – HienaLouca
I-Nokia Steel HR - ihlakaniphile kunokuba uyifunayo
Ngamana 27, 2018 Dianne Reeves KwiGadi
Ukuba i-Nokia ayifumananga, ndifanele ukuba ndijongane nemveliso yakhe iminyaka emininzi. Iifowuni ze-Today zeli nkampani azikho nto ezithakazelisayo kuzo, nangona kunjalo, nangona kunjalo, ngezoxhobo zokusebenza.
Eli nqaku lisuswa kwi-archive I-magazine 4 / 2018
Kwiminyaka emininzi edlulileyo imbono yokudibanisa imbopheleleko yokuqina kunye nokubukela okuqhelekileyo kwakuyizinto ezintsha, kodwa zingozi. Ngelo xesha xa imarike kuqala smartwatche ngathi ukuba Pebble Cookoo wabonakala, i Withings wacebisa yinto eyahlukileyo: a mncane, kuhle, kodwa imisebenzi niepozbawionego okhuphisana zabo. Umsebenzi - ngokuba wayethetha malunga naye-wayenomtshini weklasi kunye namacebiso amabini, kunye nesithathu, encinci, yafudukela kwintsimi ekhethiweyo kwaye yabonisa amanyathelo amaninzi esithathileyo ekujoliswe kuyo. Ukufunda kwakulungele kwaye kuyimvelo ukujonga iiyure. Ngaloo nto, akumangalisi ukuba umlindi awuqokelelanga kuphela ukuhlaziywa okulungileyo, kodwa wanikwa nezinye iindlela ezininzi. Inguqulelo entsha, esele idayiswe ngeNokia, ibizwa ngokuba yi-Steel HR, kwaye nangona i-predecessor ihluke ngokuphawulekayo, ikwabonakaliswa ngobuchule obufanayo kunye namandla.
Insimbi HR, ekuboneni kuqala, i-watch watch classic nge-indices elula, ejikelezayo kunye ne-envelope ye-stainless steel and panels kunye ne-szlufką. Kukho ubukhulu bomibini - 36 mm kunye ne40 mm. Ikhetho lesibini linomqolo obanzi kunye neendleko zongeziweyo ezincinci, ubungakanani bekhuselo, nangona kunjalo, ngendlela efanayo kuzo zombini iinguqulelo. Amashishini atholakala ngeentlobo ezintathu zokubamba: isikhumba, i-silicone kunye nokugaya. Ndavavanya inguqu ye-40 mm nge-black silicone strap; ukuba imvulophu yenza into ephawulekayo, le ngxube ayinakwaneleyo ekhangela yonke into enothuli, ngaphezu koko, iyincinci. Imvulophu yenziwe nge-stainless steel stainless, yanikwa kuphela iqhosha, lixelisa intloko (iyure, nangona kunjalo, siyifaka kwifowuni). Kwi-dekielku yayingu-sensor pulse sensor kunye nesixhobo sokushaja, iwashi idinga ishaja eyenzelwe yona. Umlindi awunamanzi kwi-5 ATM, ngoko unako ukubhukuda. Nangona i sixhobo sinqabile (ubuncinane kuthelekiswa nexesha le-classic), kwi-13 mm ubukhulu, imisa kakuhle ubukhulu kunye noncedo oluqinisa imida ye mvulophu. On esihlahleni ufana pretty kakuhle, nangona pogardziłbym ngakumbi masywniejszym njongo.
Ukuxhasa iwashi yisicelo seMpilo Mate, edibanisa idatha kuwo onke amadivaysi akwaNokia (eyona nkqubo endiyisebenzisayo kunye neesisindo ze-Body Cardio). Ukuba ubukade ubala i-akhawunti kunye nesicelo sokufakela, idatha yakho idluliselwe. Inkqubo ibonisa idatha yangoku kwixesha le-axis, isishwankathela imihla ngemihla kumanyathelo amaninzi kunye nobude bokulala, kunye nemifanekiso echaza izigaba ezihlukeneyo. Kwi tab elandelayo, babuthe ezihlambulukileyo zahlelwa ngokweendidi (ukongeza amanyathelo, izinga lentliziyo kunye nokulala kunye nathi, umzekelo, ubunzima, izicwili adipose okanye kunxano umzimba kuyimfuneko, kunjalo, uyifake ngesandla okanye usebenzise ezinye izixhobo). I-Pulse ichazwa ngokuhlula kwiindawo, kuba inkcazo ecacileyo ingafikelelwa ngokuchofoza inkinobho ethi "Ngaphezu". Kubuhlungu ukuba inkcazo enjalo ayikho nakwimeko yokulala.
Umlindo ngokwawo unokwazi ukubona imisebenzi yomzimba, kodwa ayikho into enhle kuyo. Ukuqhuma kunquma ngokuchanekileyo, nje ngomkhonto, kodwa ukufudumala kwi-orbitreku kuyaqaphela ngokuqhubekayo ukubhukuda (ubuchule bubungama-100%). Ukususela ngamaxesha kwandisa imisebenzi echazwe ngokuthi "Eminye", ngelixa ndenza umsebenzi owenzela indlu. Oku kuyinyaniso, kuba enyanisweni ndandisebenza, kodwa andithathi njengolu qeqesho (ngaphezu koko, i-Fitbit yam ayibhaliswanga encinci). Ngokufanayo, umbuzo wokufumana ubuthongo - Ndingathanda ukulala ngokubhekiselele kumaphuzu kum Health Mate. Kubonakala ukuba kunelungelo lokunciphisa umsebenzi walo ubuncinci, ukuze i-HR HR icinge ukuba silele. Ingxaki kukuba oku, ubuncinci, kubandakanya ukuhamba ngeenxa zonke kwigumbi ukuya kwelinye igumbi, ukuxubha amazinyo akho okanye ukuchithwa kwezenzo - izenzo ezingenakuzenza, ukulala. Ngexesha leentsuku ezimbalwa zokuqala, iimpazamo zaphindaphindiwe, kwaye kwafuneka ndilungise iziphumo ngesandla, kodwa emva kweveki ndaqaphela ukuphucuka okubalulekileyo ngokuchaneka kwexesha, endiya kulala ngalo. Ngaphandle, kufuneka ufake iinkqubo apho ungaqala ukuphucula impilo yakho. I-HR HR ikuvumela ukuba ujoyine enye yazo, i-motywującego yokulala ngokufanelekileyo. Ukuba sesele silele: iwashi ingasisiphakamisa ngexesha elithile, kwaye xa ifumanisa ukuba ubuthongo bububi, kuya kwenza njalo kungekudala ukwenza kube lula ukuvuka. Kuze kube ngoku, kanye kuphela xa i-alamu isebenze kum ngaphambilana nexesha elimiselweyo, kunzima, nangona kunjalo, kunzima ukubona ukuba le yiphutha lam iphupha lam litye.
Idata eboniswe kwisicelo iluncedo ekuhlalutheni usuku, iveki okanye inyanga, ukuqinisekiswa kwazo kwangoku, nangona kunjalo, kulungele ngakumbi ngokuchanekileyo kwiwashi. Insimbi HR ineskrini esincinane se-monochrome, phezulu kwendlela yokudayela, ebonisa iiparamitha ezilinganiswe kwisixhobo. Olunye ulwazi, ukutshintsha iqhosha kwimeko, ngoko xa zonke izikrini zivuliwe ukuze zifike kule mizuzu yokugqibela, kuthatha ixesha. Siyakwazi ukubona umhla, ixesha (elifanelekileyo kakhulu kumnyama kuba izicebiso azikho i-fluorescent), intlawulo yenhliziyo, amanyathelo, umgama, iikhalori ezitshisa, ixesha kunye nezinga lebhethri. Iskrini sinokubonisa iimpawu zesaziso (ezihamba kunye nokutshintsha). Ukubamba iqhosha elixinzelelweyo elibangela ngexesha lokuqeqesha apho izinga lokutshiza likhuphuka, kwaye emva kokuphela kwalo msebenzi uya kuhlukaniswa kwisicelo. Inkonzo yewashi ilula, kwaye ukuvumelanisa kwenzeka ngokuzenzekelayo ngeBluetooth. Ngaloo nto unakho ukulibala ngenxa yesinye isizathu: ibhetri ihlala kunye neentsuku ze-25 zomsebenzi (andinako, ngelishwa, ndiyakususa ixesha lokuvavanya).
Akungathandabuzeki ukuba i-Steel HR njengamanye ama-crystal ahle kakhulu kunye nemisebenzi ehlakaniphile. Akunabo abo bajwayele ukusetyenziswa kwamadivayisi e-Apple Watcha kunye ne-Android Wear, baya kufumana ukukhankanywa kwabo phakathi kwabathandwayo bokubukela beklasi. Izixhobo zihle kakhulu (ukuba ukhetha ibhande ngaphandle kweerubha), kodwa isofthiwe ayigcinanga ncinane. Ihluke ifomu - kuphela kwaye kunjalo.
Оценка iMagazine: 5/6 5/6
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-352, ukutyelelwa kwe-2 ngosuku)
День бета-1 - iOS 11.4.1, i-watchOS 4.3.2, i-tvOS i-11.4.1, i-macOS i-Sierra Sierra i-10.13.6
I-TPV ithatha iilayisenisi zeemveliso zomsindo we-Philips
Iintengiso ze-iPhone X kwiimeko zebhola
Iimvumi ezinkulu zeTV, ezincinci azikabi
I-Netflix ibhekisela ekuhloleni iiphakheji eziphezulu ze-Ultra
I-brand yeFibaro ishintsha umnikazi
Post Previous:Namhlanje: iRada BNR idlulele eGrodno
Okulandelayo Post:Ndingathanda ukubukela amabhayisikobho afana ne "Solo: Star Wars Stories" ebhedeni, kungekhona kwi-cinema
UJessica Weaver (uJessica Weaver) kunye nezigidi ze-4.9 ... (11)
Iimpawu ezimnandi zasehlobo zasehlobo: I-22 ifoto (8)